သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ အနောက်တံခါးကိုဖွင့်ခြင်း – CHAR TAKE
” ဖြန်း နင့် အာ့တာ ဘာလုပ်တာလဲ ” တင်းရင်းနုညံ့တဲ့ အထိန်းအကွတ်မပါ ရင်သားနှစ်မွှာကို ပါးလွှာတဲ့ ည၀တ်အိင်္ကျီပေါ်ကနေ ညင်သာစွာ အုပ်မိုးပေးလိုက်မိတဲ့ ကိုယ့်လက်ဖျံကို အရိုက်ခံလိုက်ရခြင်းနဲ့အတူ တုန်ရီလှိုက်မောစွာ ရှက်ဒေါသနဲ့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အ သံ အလင်းမရှိလူသံ၊ သူသံ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အမှောင်ဆန် မိုးညတစ်ညရဲ့ သန်းခေါင်ယံအချိန် ချိုမြိန်မှန်းသိတဲ့ ခန္ဓာဝရဇိန် နတ်စည်းစိမ်ခံစားဖို့ အစပျိုး အရှိန်ယူနေတဲ့ အခိုက်အတန့် ..
ပါးလွှာတဲ့အကာနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ အခြားတဘက်မှာတော့ ဆူဖြိုထွားကြိုင်း ကျားရိုင်းတို့အကြိုက်စွဲခိုက်လောက်တဲ့ အရသာပုံဆောင်ခဲဆွဲ ကိုင်ချင်စရာ ရင်သားနှစ်မြွှာ .. စာစစ်ခန်းမှာ ရာထူးတက်ဖို့ဗျူးဝင်နေတာမဟုတ်လို့ မေးလာတဲ့ ကွက်စ်ရှင်ကို မဖြေမိပဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ဗျူဟာခင်းနေလိုက်တယ်၊ တူနှစ်ကိုယ်စက်ရာထက်မှာစည်းခြားကာထားတဲ့ ဖတ်လုံးကိုဖယ် လက်နက်(ပေါင်ခြံကြားကထောင်တန်)တ စ်ထောက်စာ အကွာကသူ့ခန္ဓာအထက်ပိုင်းရဲ့ ရင်ခွင်တစ်ပိုင်းကို ဆုတ်နယ်ပေးတာပေါ့၊
နောက်ထပ်အသံမထွက်လာပဲ တိတ်ဆိတ်စွာခံယူနေတဲ့သူငယ်ချင်းမအတွက် ကောင်းခြင်းမဟာ အရသာတွေပေးဝေ မျှဖို့ တဆင့်တက်ပြီး လှုပ်ရှားလိုက်တယ် ၊ ကိုယ့်ဘက်ကို ကျောပေးထားတဲ့စွဲမက် ဖွယ် ခန္ဓာရှင်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ ဗိုက် သားပြင်ကို ညာလက်နဲ့ ပွတ်သပ်ရင်း ဘက်လက်က စိတ္တဇ ပန်းချီဆန်ဆန် လိပ်ခွေ လိမ်တွန့်နေတဲ့ ဆံနွယ်စတွေကြား ပြေးလွှား ဆော့ကစားပေး တာပေါ့၊
အမှောင်ခင်းကျင်းတဲ့ မိုးသဲညရဲ့ မိုးခြိမ်းသံရှည်ကြီးတစ်ခုက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းကို ဖြိုခွင်းပစ်လိုက်တယ်၊ ခက်ခွာခွာအ နေအထားမှာ ကျောခိုင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းမဟာ ကာမကျားရိုင်းရဲ့ ခံတွင်းဝဆီ ခိုဝင်ရာအမှတ်နဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာ ပြေးဝင်လာတဲ့ ကျွဲရိုင်းကြီးပမာ ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ပြီး မျက်နှာအပ်ကာ ကိုယ့်ကိုတုန်ရီနေတဲ့ လက်နဲ့ သိုင်းဖတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ အခွင့်အခါသင့်လို့ အချိန်မလင့်ခင် ကိုယ်လည်း ပန္နက်ရိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်တော့တာပေါ့
အချိန်ကား လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က ; အတိအကျပြောရရင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ မိုးရာသီညတစ်ည သူငယ်ချင်းမရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အစ်မအကြီးဆုံးတို့ ဇာတိမြေ ကို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ကြတယ်၊ သူ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲရဲ့ အိမ်သွားအိပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့်လည်း လင်မယားရန်အကြီး အကျယ်ဖြစ်ထားလို့ အစ်ကိုဖြစ်သူက လာမအိပ်ဖို့ အသနားခံတာကြောင့် သူငယ်ချင်းမခင်ဗျာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပေါ့၊ လူနေကျဲတဲ့ မြို့သစ်ဘက်က နံကပ်နှစ်ထပ်တိုက်ထဲမှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ထဲ အိပ်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံမစဉ်းစားဝံ့စရာ၊
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာ လုပ်ဖော်ကိုင် ဘက်တွေ လည်းဖြစ် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စကြနောက်ကြမို့ ရင်းနှီးပွင့်လင်းသလို အပြောအဆိုလည်း ရဲတင်းကြတယ်၊ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိပေါ့၊ လိုအပ်ရင်လည်း ကူညီဖေးမကြ၊ ဇီးရွက်သာ သာလောက်ဖြစ်နေရှာတဲ့မျက် နှာငယ်လေးနဲ့သူငယ်ချင်းမကို စက်ဘီးဘေးတိုက်ယှဉ်နင်းရင်း ဟဲ့ _ မိစု’ ‘နင် ဘာဖြစ်နေတာလဲဟ၊ နင့်ရုပ်ကလဲ လင်သေလို့ နာရေးချပြီး ပြန်အလာ အိမ်မီးထဲပါသွားလို့ ယူကြုံးမရဖြစ်နေသလိုပဲ”နင်မသိဘူးဟ၊ ငါ့အိမ်မှာ ဒီနေ့ညငါတစ်ယောက်ထဲ အိပ်ရမှာဟ”ဆိုင်က ဟာမတွေကလည်း အိမ်လိုက်အိပ်ဖို့ တစ်ယောက်မှ ခေါ်မရဘူး’
ပြောရင်း မျက်ရည်တွေဝေ့နေတာမြင်တော့ ကိုလည်းစိတ်မကောင်း၊ ‘ ဒီလိုလုပ်ဟာ ငါ့အိမ်ကိုလှမ်းပြောပြီး ငါလိုက်အိပ်မယ်လေ၊ နင်ကအပေါ်ထပ်မှာအိပ်ပေါ့၊ ငါကအောက်ထပ်မှာအိပ်မယ်’ ‘ဟယ် နင်တကယ်ပြောတာလား’ ၀မ်းသာအဲလဲ အသံနဲ့ပြန်မေးတယ်၊မသိရင် အိမ်တွေ ၊မြေတွေပေါင် ထားပြီး အကြွေးသိန်းချီ တင်နေတဲ့ ငမွဲတစ်ယောက် အခုပဲထီပေါက်သွားသ လိုလို ဥပမာပြော ပါတယ်၊ ‘တကယ်မဟုတ်ပဲ ပြောမလားဟ၊ နောက်စရာမှမ ဟုတ်တာပဲကိုး’ ‘အေးပါဟာ၊ ငါနင့်ကိုညစာကျွေးပါမယ် ” ငါတခုတော့ပြောမယ် မိစု၊ ဆိုင်ကလူတွေ တစ်ယောက်မှ မသိစေနဲ့” ဟင် _ ဘာလို့လဲ၊ ငါတစ်ယောက်ထဲမို့ အဖော်လာအိပ်ပေးတာပဲဟာ’
‘မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့အိမ် သူစိမ်းယောင်္ကျား တစ်ယောက်က အဖော်လာအိပ်ပေးတာ မသင့်တော်ဘူးလေဟာ နင်အဲ့လောက်မအနဲ့”အေးပါ၊အေးပါ .. ငါ့အိမ်ကလူတွေလာရင်လဲမပြောပြဘူး စိတ်ချ’သူငယ်ချင်းမကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးတဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းစားသောက်ပြီး အိပ်ချိန်စောသေးတာမို့ TV ထိုင်ကြည့်ကြတယ်၊ ည 9:00 ထိုးတော့ သူငယ်ချင်းမက သူကြောက် တတ်လို့ ကိုယ့်ကိုအပေါ်ထပ်မှာပဲ ဧည့်ခန်းထဲအိပ်ဖို့ပြောတာပေါ့၊ သူကတော့ သူ့အစ်မနဲ့အတူအိပ်နေကျအခန်းမှာ တစ်ယောက်ထဲ အိပ်မယ်တဲ့၊ အပေါ့အပါးသွားဖို့ အောက်ဆင်းချင်ရင်လည်း နှိုးမှာနော်တဲ့ ၊ ည၀တ်အိင်္ကျီဂျိုင်းပြတ်နဲ့စပန့်သားဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတော့လည်း သူငယ်ချင်းမက အသားညိုပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲ့ဗျ၊
သူကနည်းနည်းတော့ဝတယ်၊ တင်နဲ့ရင်ကထွားတယ် ဗိုက်မပူပေမယ့် ခါးတုတ်တယ်၊ အသားညိုပေမယ့် အသန့်ရှင်းတအားကြိုက်တာ ၊ပြောဦးမယ် အခန်းထဲ ၀င်အိပ်တယ် သာပြောတာ တံခါးက မပိတ်ဘူး တစ်ယောက်ထဲမို့ ကြောက်လို့တဲ့၊ ကိုယ်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းကို ချွန်းမအုပ်နိုင်တော့ လက်နဲ့ပဲပြီးရတာပေါ့ ၊အိပ်ယာပြောင်းလို့အိပ်မရတာရယ်၊ တူနှစ်ကို တစ်အိမ်ထဲ အချစ် ပွဲလေး နွှဲခွင့်ရရင်ဆိုတဲ့အတွေးရယ်ကြောင့် အိပ်မရတာရယ်၊ အိပ်ယာထဲ ဟိုလှည့်လိုက်၊ ဒီဘက်လိမ့် လိုက်ပေါ့၊ အိပ်မပျော်တဲ့အဆုံး ဘုရားစင်ဘေးက ဘီရိုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းစာအုပ်ကြီး တွေ့တာနဲ့ ထိုင်ဖတ်နေလိုက်တယ် …
ဆယ်နာရီခွဲ သာသာလောက်ကျတော့ လေတွေတအားတိုက်ပြီး မီးကပျက်ပါလေရော၊ မီးလ ည်းအပျက် မိုးတွေကလည်း တမဟုတ်ခြင်း ပြိုဆင်း လာပါရော၊ ခြိမ်းသံ၊ ခြောက်သံတွေနဲ့ လျှပ်စီးတွေကလက်သေး၊ ဗုဒ္ဓ၀င် ကျမ်းကြီး ဘီရိုပေါ်ပြန်တင်ပြီး မှောင်မှောင် မဲမဲထဲ အိပ်ယာဆီပြန်သွားမယ်လို့လုပ်တုန်း ဘယ်အချိန်ကအပြင်ရောက်နေမှန်းမသိ သူငယ်ချင်းမက ကိုယ်ကိုမတွေ့တော့ ကိုယ့်နမည်အသံကုန်အော်ပြီးငိုပါလေရော၊ကိုယ့်မှာပြန်ထူးရင်းအမြန်ပြေးလိုက်ရတာ ခလုပ်တိုက် လဲမကျတာ ကံကောင်းလို့၊ ကိုယ်က မရောက်သေးဘူး သူကကိုယ့်ခြင် ထာင်ထဲရောက်နှင့်နေပြီ၊ နားနှစ်ဘက် ပိတ်ထားပြီး ငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေတာ၊ ကိုယ်လည်းသူနဲ့သုံးပေအကွာလောက်မှာထိုင်ပြီးအားပေးစကားပြောရတာပေါ့၊(ငဗစ်ကြောင့် သုံးပေခွာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်၊ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့ခွာထိုင်တာ)😁😁
မိုးခြိမ်းသံတွေငြိမ်ပြီး လျှပ်စီးလည်းမလက်တော့၊ မိုးကလည်းနည်နည်း စဲသွားလို့ ‘မနက်ကျရင် ဆိုင်သွားရမှာ နင်သွားအိပ်တော့၊ ငါလည်း အိပ်တော့မယ်’ဆိုတာကို ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ ငါနဲ့အတူ ခြင် ထောင်ထဲလာအိပ်ပါတဲ့ အကျယ်ကြီးပဲတဲ့ အလည်ကနေ ခြေတင်ချထားမယ် နင်ဟာနင်ဟိုဘက်လှည့်အိပ်တဲ့၊ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့ မဖြစ်ဘူး ဇွတ်ပိတ်ငြင်းတော့လည်း တစ်ညလုံးမအိပ်ဘူး နင်လည်းမအိပ်နဲ့တဲ့ စကားထိုင်ပြောကြမယ်တဲ့ ၊မှောင်မိုက်တဲ့ ညတစ်ည လမင်းကမသာ မီးက မလာ အိပ်ယာထက်မှာ တခြင်ထောင်ထဲ အိပ်ရမှာ ဘယ်ကျားက ဥပုတ်စောင့်နိုင်မှာတဲ့လဲ၊
သူလည်းမသိတာတော့မဟုတ်၊ ကျားကိုက်ခံရမှာထက် တောခြောက်ခံရမှာကို ပိုကြောက်နေရှာတဲ့ ဒရယ်မလေးဖြစ်နေတာ၊သူ့အကြောင်းတော့ ကိုယ်ကကောင်းကောင်းသိတယ်၊ မြူဆွယ်ဖျားယောင်းတာ မဟုတ်သလို လမ်းကြောင်းခင်းတာလည်း မဟုတ်၊ သူ ကြောက်တတ်တာလည်း ဆိုင်ကလူတိုင်း အကုန်သိ၊အသားကညို ဆံပင်ကကောက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကထူသေးတယ်၊ တင်နဲ့ရင်ကတော့ မတ်လောက်စရာပေါ့၊ သူ့ကိုကြိုက်မယ့်သူမရှိသလို သူကလည်း စကားပြောရင်တောင် စည်းအကျော်မခံဘူးနော်၊အခုကသူကြောက်တတ်လွန်းလို့သာကိုယ့်အတွက် ဒီလိုအခွင့်ရတာ၊ကိုယ့်လည်းသူကြောက်တယ်၊ နင်ငါနဲ့တော့ဝေးဝေးခွာအိပ်နော်တဲ့၊ မိုးရွာရတဲ့အထဲမီးကပျက်နေတာတဲ့၊ ဖယောင်းတိုင်ကလဲမရှိဘူး၊ငါတစ်ယောက်ထဲအိပ်ရရင် ကြောက်လို့သေသွားနိုင်တယ်တဲ့ ။
ငွေမိုးစတွေစဲလို့ ရွှေမီးပြန်ရောက် လာချိန် မှာတော့ မွှေ့ယာထူထူထက်က ဇာချဉ်ထောင်ရဲ့ ရင်ခွင်မှာ အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာနဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် ယမ္မက်စည်းစိမ်ခွက်ထဲ ပြုတ်ကျလုနီးနီး အခြေအနေပေါ့၊တွေ့မရှောင် ကျာပိန်နဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ကျွဲမကြီးတို့ရဲ့ သလွန်ထက်ကအချစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် မာန်ဖီကြုံးဝါးနေကြတဲ့ အခိုက်အတန့်ဟာလူ့ဘောင်လောကရဲ့စည်းဝိုင်း အပြင်ဘက်မှာသာယာလှိုက် မောခြင်းအပြည့်နဲ့ပါပဲချောကလက်ရောင်သန်းတဲ့ ရင်စိုင်ထွားထွားကြီးကိုားပါးတရစို့ပေးရင်း ပိတုန်းရောင်လယ်ကွက်လေးထဲက အ တွင်းသားရဲရဲလေးကို လက်ခလယ်နဲ့ထွန်ယက်ပေးနေတယ်၊ အမဲရောင်မြတ်ခင်းလေးနဲ့မဟူရာဂူဝရဲ့ အတွင်းပိုင်းလှိုင်ခေါင်းတလျှောက် မှာတော့ စေးကပ်စိုရွှဲကာ အရည်လှည့်နေလေရဲ့၊
မဲနက်တဲ့ နို့ထိတ်လေးနှစ် ဘက်ကို လျှာနဲ့ရှိုက်ယူဆော့ကစားလိုက် အညိုရင့်ရင့် လည် တိုင်ဝင့်ဝင့်ကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက်နုညံ့တုတ်ခိုင်ပြီး အာဖရိကဆန်တဲ့ ပေါင်တန် အတွင်းသားတွေကိုလက်နဲ့ပွတ် သပ်ပေးလိုက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကွက်ရွှေ့မှုတွေကြောင့် ထွားကျိုင်းမဲနက်တဲ့ အပျိုရိုင်းမလေးခင်ဗျာ အစာစားကျင်းရဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာကြိုးငြိနေရှာတဲ့ မေထုန်နွားမကြီးလို တရှူးရှူးတရှဲရှဲနဲ့အစာ ခွက်ဆီ ဘယ်အချိန်ရောက်မလဲ ရုံးကန်နေရတယ် ၊ တချက်တချက် ရင်ဘက်ကြီးကော့ တက်လာလိုက်၊ တခါတခါ မွှေ့ယာနဲ့တင်ပါးဆုံကြီးခွာသွားလိုက်နဲ့ မသိရင် ဆပ်ကပ်အဖွဲ့ထဲက မြွေမလေး ကပြဖျော်ဖြေနေသလား အောက်မေ့ရတယ်၊ မခံစားနိုင်တဲ့အဆုံး ချောကလပ်ရောင် အပျိုရိုင်းမလေးရဲ့ ရင်ထဲက စကားလုံးတချို့ နှုတ်ခမ်းဖျားက ပွင့်အန်ကျလာတော့တယ် ၊ “ငါ မနေနိုင်တော့ဘူးဟ နင်ကလဲ လုပ်ပါတော့ဟာ ”
ပန်းတိုင် အရောက်ချီတက်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့တာမို့ ဘာမှစီစဉ်မထားမိ၊ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ရင် လက်အိပ်လိုအပ်သလို၊ ဘောလုံးကန်လို့ ဂိုးသွင်းတဲ့အခါမှာလည်း ဘွတ်ဖိနပ်ပါမှ ပြည့်စုံလေသည် မဟုတ်လား၊ကိုယ့်ရဲ့ဖွားဖက်တော် မောင်မဲလုံးအတွက် ညနေက ယူနီဖောင်းမ၀ယ်ခဲ့ရလေတော့ ဖိုင်နယ်ရောက်မှ နောက်ကြောင်း ပြန်ခေါက်ရမလို၊ကြံရာမရပေမယ့် သူရဲခေါင်းတို့မည်သည် တပ်ပြန်ခေါက်ရိုးထုံစံမရှိသည်၊ လှေခွက်ပဲကျန်အလံမလှဲ၊ တောင်ငူရာဇ၀င်ထဲကနောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်တိုက်သလိုကိုယ်လည်း ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ချောင်ကပ်ဖိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် အပေါ့ အလေးသွားပြီး ကို သင်ပြသလို သေချာဆေးကြောသန့်ရှင်းကာ ရေချိုးထားတဲ့ရင်ထွားထွား တင်ကားကား ခါးတု တတ် တုတ်နဲ့ မဲမှောင်ဝင်းပြောင်နေတဲ့ ကျွဲမကြီးရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ကြည့်ပြီး လက်နဲ့တစ်ချီထုတ်ပစ်လိုက်တယ်၊
ကိုယ်လည်းရေချိုးလိုက်သည်မို့ အေးချမ်းလန်းဆန်းပြီး ယုံကြည်မှုအပြည့် နဲ့ပေါ့၊ ဆားဗစ်ရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကာမကျားပိန်ကြီးနဲ့ အတွေ့ အကြုံမရှိသေးတဲ့ မနူးမနပ်ကျွဲမလေးတို့ အ၀တ်မပါခန္ဓာချင်း ပူးကပ်လို့ အနွေးဓာက် ဖလှယ်ရင်း အရသာ စယူကြတယ် ၊ မသိမသာထော်နေတဲ့ ကျွဲညိုမရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးထူ ထူကြီးကို ကစ်ဆွဲ ရင်းထွားကျိုင်းနုညံ့တဲ့ မင်းဂွတ်သီးရောင် ရင်သားပြောင်ပြောင်ကြီး နှစ်ဘက်ကို ဆုပ်ကိုင်ကစားပေးတာပေါ့ ၊ တခါတခါ မဲပြာနေတဲ့ ပေါင်တန်အတွင်းသားတွေဆီ လက်ကရောက် သွားသေးတယ်၊ အနည်းငယ်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာပြဲကြီးကနေ ပါးစပ်နဲ့လျှာဟာ တဖြေးဖြေးခြင်း အောက်ပြည်အောက်ရွာဆီစုံဆင်းလာခဲ့တယ် ၊ ဗိုက်သားတပြင်လျှာနဲ့ကစား ရင်း ညာလက်ကရင်သားမို့မို့ထိတ်လေးကို ဆော့ကစားပေး၊ ဘယ်လက်က ထွန်ယက်မခံရဖူးသေးတဲ့ လယ်ကွက်ကို ထယ်ထိုးပေးလိုက်တယ် ၊ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းတွေကြားမှာ တခါတခါငြီးသံလေးပါလာတာ နားဆင်လို့ အကောင်းသားဗျ ..
ကဲ … အနောက်တံခါးဖွင့်ဖို့ စတင်ပြီပ တ်လက်အနေအထား ၁ တီတူးငှက်လို ခြေထောက်နှစ်ချောင်းမိုးမျှော်ခိုင်းပြီး ပေါင်တန်တွေကို ဗိုက်ပေါ်ပြန်ခေါက် လှဲပေးလိုက်တယ်၊သူ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ တံကောက်ကွေးကိုကိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးအတွင်းထဲထိ ပြောင်စင်အောက် လက်ခလယ်နဲ့နှိုက်ဆေးထားတဲ့ စအိုဝကို အသင့်ယူထားတဲ့ အုန်းဆီရွှဲနေအောင် သုတ်ပေးလိုက်တယ်၊သပြေသီးမှည့်ရောင်သန်းပြီး ကျုံ့နေတဲ့အဝလေးကို လက်ခလယ်ထိတ်လေးထည့်ပြီး ပတ်လည်လှည့်ပေးရင်း ညာလက်နဲ့ရှေ့တံခါးကိုအကွဲချောင်းအလိုက်လေး အထက် အောက် ပွတ်ဆွဲပေးတယ်၊ လက်ခလယ်ကို အုန်းဆီဆွတ်လိုက် စ အိုဝလေးမွှေလိုက်နဲ့ အတော်လေးဆီဝသွားတော့မှ အထဲ ကိုမ သိမသာ ထိုးသွင်းပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင် အ၀င်အထွက် မှန်မှန်နဲ့ ကြွက်သားတွေ ဟလာအောင် လုပ်ရတယ်၊
လက်ခလယ်နှစ်ဆစ်စာလောက်ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တော့မှ ပိုစစ်ရှင် ပြောင်း လိုက်တယ်၊ ကျားကြီးရေသောက် လေးဘက်ထောက်ပေါ့၊ကိုယ်ကနံရံကိုမှီ ပေါင်ကားပြီး ခြေဆင်းထိုင် လုံးကြီးပေါက်လှ ကျွဲမလေးကို ကိုယ့်ဘက် ဖင်ပေးပြီး ဒူးထောက်ပေါင်ကား လက်နှစ်ဘက်တံတောင်ဆစ်ထောက်အနေအထားမို့ မဲပြောင်နေတဲ့ တင်သားစိုင်ကြီးနှစ်ခုက ကိုယ့်ကိုစိန်ခေါ်နေသယောင်ပါပဲ၊ခါးလေးရှေ့ကော့ခိုင်းလိုက်တော့ အနောက်တံခါးဝဟာ ရေအိုးတည်ထားသလို ပုံစံလေး ပေါ့၊ နည်းနည်းနားမယ် ၊ ခဏလေး သည်းခံဖို့ပြောပြီး လက်ငြိုးလက်မနဲ့ စအိုဝကိုဖြဲပြီး အုန်းဆီရွှဲအောင်လောင်းထည့် လက်ခလယ်စိုက်ပြီး မွှေလိုက်တယ် ဘေးကိုဝိုက်မွှေလိုက်၊ ရှေ့ကိုထိုးသွင်းလိုက်နဲ့ ဆီဝနေတဲ့ အပေါက်လေးဟာ နည်းနည်းချောင်ချိလာသည်မို့ လက်ငြိုးပါရောပြီး ထိုးသွင်းလိုက်တယ်၊ဒီတခါတော့နာလို့ကျွဲမကြီး တွန့်ခါသွားတယ်၊ 😁
လက်ခလယ် ၊ လက်ငြိုး နှစ်ချောင်းပူး တလှည့် လက် ခလယ်၊ လက်သူကြွယ် နှစ်ချောင်းပူး တလှည့် ကောင်းကောင်းဝင်နိုင်ထွက်နိုင် အနေ အထားရောက်တော့ အနားယူ ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီဗူးကို ကလေးဆော့တဲ့ အူစီဖောင်းစွတ်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ထိုးသွင်းလိုက်တယ်၊ လက်သုံးဆစ်စာ ၀င်သွားတော့ နာလို့အော် တာနဲ့ အဲ့အတိုင်းရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုဘေးတိုက် လှဲခိုင်းလိုက်တယ်၊ စိတ်တော့ရှည်ရတာပေါ့ အနောက်တံခါးဆိုတာ ၀င်ချင် တိုင်းဝင်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ နှတ်ခမ်းနီ ဗူးထည့်ရက်နဲ့ပဲ သူ့အတွက် ဖီးဖြစ်အောင် ပြန် လုပ်ပေးရတယ်၊ ထွားကျိုင်းနုညံ့ တဲ့ရင်သားကြီးတစ်စုံကို စို့လိုက်၊လျှာနဲ့တွတ်လိုက်၊ နှုတ်ခမ်းနဲ့ညှပ်ပြီးကစားလိုက် လုပ်ရင်း လက်ကအမွှေးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ တောရိုင်းကြီးထဲ တောလည်ထွက်ရတယ်၊ တော်တော်ကြာအောင် နှိုးဆွပေးပြီးတော့ တခါပိုစစ်ရှင်ပြောင်း ရပြန်ရော၊ 😃
ကုတင်အစွန်းမှာ မဲပြောင်နေတဲ့တင်စိုင်ကြီးတေ့ထားပြီး ပေါင်ကား ပတ်လက်လှန် အနေအထားနဲ့ ကိုယ်က ကုတင်အောက် ခြေဖျားထောက်ထိုင်ပြီး အတွင်းသား ရဲရဲလေးကို လျှာနဲ့မွှေပေးရင်း စ အိုထဲထိုးသွင်းထားတဲ့ အူစီဖျောင်းစွတ်နှုတ်ခမ်းနီဗူးလေးကို တချက်တချက်ကစားပေးတယ်၊ နာလို့ တွန့်သွားပေမဲ့ အမေ အမွေပေးတဲ့လယ်ကွက် ထွန်ယက်ပေး နေတာမို့ ဖီးက လဲရှိတာပေါ့ ၊ အမွှေးကြားက ဘေးနှုတ် ခမ်းသားတွေ စုပ်ပေးလိုက် လှိုင်ခေါင်းထဲ လျှာနဲ့ ထိုးလိုက် ညာလက်ကအုံးသီးလောက် နီးနီးရှိတဲ့ အုံးခွံရောင် ရင်သားထွားထွားကြီးတွေဆီ ခရီးထွက်နေတယ်၊ ဘယ်လက်က နှုတ်ခမ်းနီဗူးလေးကို ညင်ညင်သာသာနဲ့ ဖြေးဖြေးခြင်းအသွင်း အထုတ် လုပ်ပေးတာပေါ့၊
နှုတ်ခမ်းနီ ဗူးစိုက်ထားတာ ကြာလာတော့ စအိုအ တွင်းပိုင်း ကြွက်သားတွေ ဟအာ သွားပြီး ဆူဖြိုးထွားကျိုင်းတဲ့ အပျိုရိုင်းကျွဲမလဲ သိတ်မနာတော့ဘူးထင်ရဲ့၊ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေမယ့် ခါးတွေ၊တင်တွေ တွန့်မသွားတော့ဘူး၊ဘက်ပေါင်းစုံ ပြင်ဆင်ပြီးပြီးမို့ကိုယ့်ရဲ့ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထပြီးသံချောင်းလိုမာထန်နေတဲ့ မဟူရာအမြောက်ကြီးနဲ့လုံးကြီးပေါက်လှ ကျွဲပျိုမရဲ့အနောက်တံခါးဝကိုထိုးသွင်းပစ်ခွင်းဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်၊ ကုတင်ပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ဖင်လှည့်ပြီး လေးဘက် ထောက်ခိုင်း လိုက်တယ်၊ အုန်းဆီ ထက်ဆွတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီဗူးကို ဖြေးဖြေးခြင်း ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ ee ပါချင်လို့ဆို အောက်ထပ်လိုက်ပို့ရ ပါရော၊ ပြီးရင် ရေကောင်းကောင်းလောင်းပြီး လက်နဲ့ အ တွင်းထိနှိုက်ေ ဆးဖို့ ပြောရသေးတယ် ၊ အပေါ်ထပ်ပြန်ရောက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့မဟာလက်နက်တော်ကြီးကို ခဏလောက် ရေခဲချောင်းစုတ်ပေးပါဆိုတာရွံလို့တဲ့ အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်တာနဲ့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်၊အနောက်တံခါးဖွင့်ဖို့ ဒီအဆင့်ထိလိုက်လျှောထားပြီမို့ကိုယ် လည်း အခွင့်အရေး ထပ်မယူလိုတော့ပါဘူး၊
နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ် အစီစဉ် စတင်ပြီမို့ ကိုယ်က နိဂုဏ်းချုပ် အမှာစကား ပြော ရတယ်၊ 😉😉 ‘ အရင်ဆုံး ပတ်လက် အနေအထားနဲ့စမယ်၊ ကုတင်စောင်းမှာ အပေါက်ကို ကုတင်ဘောင်အပြင်ဘက်နည်းနည်း ထုတ်ပေးထား ပေါင်ကို အရမ်းမကားနဲ့၊ (ပေါင်အရမ်းကားရင် စအို စိထားသလိုဖြစ်ပြီး ပိုနာ မှာစိုးလို့) ကိုယ်ထိုးသွင်းတဲ့အချိန်မှာ ကြောက်ပြီး အတင်းစိ မထားနဲ့၊ ee ညှစ်သလိုညှစ်ပေးရတယ်၊ အတော်လေး အရှိန်ရလာရင် ကျားကြီးရေသောက် လေးဘက်ထောက် ပိုစစ်ရှင်ပြောင်းမယ်၊ ဆီ ထပ်လောင်းပြီး အသွင်း အထုတ်ပိုမြန်လာမယ်၊ နာရင်ပါးစပ်ကပြော ခါးတွေ၊ တင်တွေမလှုပ်နဲ့ ပိုနာလိမ့်မယ်’ 👌
ကုတင် တဘက် အဖျားမှာ အနောက် တံခါးထားပြီး ပတ်လက်ပေါင်ကား နို့ထွားထွား မေထုန် နွားမကြီးနဲ့ တွေ့ကရာအကုန်စား အပေါက်မရှား တဲ့ ကာမကျားပိ န်ကြီးတို့ရဲ့ အနောက်တံခါးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကြီး စတင်ပါပြီ …” အင့် ဟင့် .. ဟင့် ” ” နာ တယ်လို့ … အား ဟင့်’ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရာပါလက်နက်ကောင်းကြီး ဖြေးညှင်းစွာဝင် ရောက်သွားသောကြောင့် ငြီးညူခြင်း..စအိုဝကို အုန်းဆီရွှဲအောင် ပြန်ဆွတ်ပြီး လက်ခလယ်နဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်း မွှေနောက်ကာ ကိုယ့်ရဲ့ပါးပြင်းထောင်နေတဲ့ မြွေဟောက်ခေါင်းကြီးပေါ်လည်း ရွှဲနေအောင်လူးပေးလိုက်တယ်၊မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း အ၀တ်မပါခန္ဓာနဲ့ထွားကျိုင်းမဲနက် ပတ်လက်ပေါင်ကား အဆင်သင့်ပြင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းမအပေါ်အလိုက်သင့်မှောက်ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်း ထူထူကြီးနှစ်လွှာကို စုတ်ယူ နမ်းရှိုက်လိုက်တယ်၊ ဘယ်လက်ကကိုယ့်ရဲ့ထောင်မက်နေတဲ့ မဟာထိတ်ဖူးကြီးကို ကိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းမရဲ့ အနောက် တံခါးဝကို တေ့ကာ ဖြေးညှင်းစွာ ထိုး သွင်းတယ်၊
ညာလက်နဲ့ မင်းကွတ် သီးရောင် ရင်အုံထွားထွားကြီးကို ပွတ်သတ်ဆုပ်နယ် ပေးလိုက်တယ် ၊ အနောက်ဂူထဲ ကွမ်းသီးလုံးဝင်သွားချိန်မှာတော့ အတွင်းကြွက်သား တွေက ညှစ်ယူ ဖမ်းဆုပ် ထားလို့ ကိုယ့် အတွက် မဟာစည်းစိမ် ခံစား ရပေမယ့် ကျွဲမကြီး နာလို့ လူးခါသွားတယ်၊ ကစ်စင်ဆွဲရင်း တန်းလန်းနဲ့ ပါးစပ်က လည်း ၀မ်းခေါင်းသံနဲ့ ငြီးညူတာပေါ့ ၊ ဆီဝမှ နတ်တိုင် ထည့်ရ လွယ်ကူ သလို ခုလဲ စိန်ဖူးကြီးကို ပြန် မထုတ်ပဲ အ၀င်ဝ ပတ်လည်ကို အုန်းဆီ ထပ်လူးရတယ်၊ ညိုညက်တင်းရင်းတဲ့ စူပါပေါက် စီကြီးနှစ်ရဲ့ ဘေးသားတွေကို အားပါးတရ လျှာနဲ့ လျက်ကာ စုပ်ယူနမ်းရှိုက်ပေးရင် ချောကလပ်ဒစ်ကြီး ကို တဆင့်ခြင်း ထိုးသွင်းရတာပေါ့၊
ကိုယ့်ရဲ့ဖွားဘက်တော် ငါးရံ့ခေါင်းကြီးဟာဖြင့် ကျင်းအောင်းခွင့်ရသည်မို့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ လူးခါဝင်ရောက်နေတယ်၊ ရာဂအကြည့်နဲ့ ရှုမ၀နိုင်တဲ့ ကောက်ကြောင်းလှ ကျွဲပျိုမရဲ့ရင်သားစိုင် ထိပ်ဖျားက ညိုမဲ စူ ထွက်နေသော နို့ သီးခေါင်းလေးကို လျှာဖျားနဲ့ ကလိ လိုက်၊ ရှိုက်ယူကာ အငမ်းမရစို့လိုက် လုပ်ရင်း ရွှေမဲချောင်းကြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင်ပန်းဝင်ဖို့ လှုပ်ရှားနေတာပေါ့၊ နာကျင်မှုသက်သာအောင် ဖြေးညှင်းညင် သာစွာ အသွင်း အထုပ်လုပ် တာမို့လို့ အ၀င်အထွက်မှန်မှန်နဲ့ အသံတော့ မမည်ပါ၊ အပျို ရိုင်းမရဲ့ နှုတ်ခ မ်းနှစ်လွှာ အကြားက အနောက်တံခါး အတွင်းသား ပွတ်တိုက်ဆွဲငင်လို့ နာကျင်စွာ ငြီးညူတဲ့အသံလေးဟာ ဆယ်ကမ္ဘာတိုင် စွဲရစ်စေနိုင်လောက်တယ်၊
” အင့် _ ဟင့် ဟင့် … အီး _ ဟီးးးး နာတယ်လို့ဆို ” ” နင်မညှာဘူး အား … တအားလုပ် တာပဲ ဝူး “ဖြေးဖြေးမှန်မှန် စည်းချက်မမြန်ပဲ ၀င်ချီ ထွက်ချီနဲ့ ထိတ်ဖူးဆီရွှဲ ဒုတ်မဲကြီး လက်သုံးလုံးစာသာသာလောက်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေနေရောက်တော့ပိုစစ်ရှင်ပြောင်းတယ်၊ ကျားကြီးရေသောက် လေးဘက်ထောက်စတိုင်ပေါ့😉😉 ကုတက်ဖျားမှာဒူးထောက် မို့မောက်ကြီးမားတဲ့ ဖင်တုံကြီးကြားက မဲနက်တဲ့ဂူပေါက် ၀င်ရောက်ဖို့ စတင်ပြီ၊ခိုင်မာတုတ်ခဲတဲ့ ဒုတ်မဲကြီးငုတ်ရှိုးဝင်ရောက် ထားသည်မို့ ဟအာနေတဲ့ ခရေပွင့်လေးလေးဟာ စွဲမတ်ဖွယ် ကျောက်မီးသွေးတွင်းပမာ ..မသိမသာ ပွင့်အာနေတဲ့ စအိုဝကို လက်ငြိုးလ က်မနဲ့ ဆွဲဟပြီး အုန်းဆီလောင်းထည့်လိုက်တယ်၊ပြီးတော့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မယ့် ဒုံးကျည်ကြီးကို နေရာအနှံ့ ဆီရွှဲအောင် လူးလိုက်တယ်၊
ready …32 1 👉👌’ အီးးးရှ် _ အ’ ” နာတယ်လို့ ဖြေးဖြေး ” ထွားကျိုင်းနုညံ့တဲ့ အညိုရောင်ရှောက် ပန်းသီးကြီး နှစ် လုံးကို ဘယ်ညာစုံ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျုံ့ သွားလိုက်၊ အာလာလိုက်နဲ့ မြူဆွယ်နေတဲ့ အနောက်တံခါးဝထဲ အမဲရောင်ဒုန်းကျည်ထိတ်ဖူးကြီး စိုက်ထည့်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်၊ ညှစ်အားကောင်းတဲ့ ကြွက် သားနံရံတွေက တင်းကြပ်စွာစုပ်ယူပြီး ကွမ်းသီးလုံးကြီးကို ငုံထားလိုက်ချိန်မှာ နာကျင်မှုကို ငြိမ်သက်စွာ ခံယူနေတဲ့ မေထုန်နွားမကြီးရဲ့ဗိုက်သားတပြင်လုံးကို လက်တဘက်နဲ့ ပွတ်သတ်ပေးရင်း မြေပြင်ရဲ့ဆွဲအားကြောင့် အောက်စိုက်နေတဲ့ရင်သား နှစ်မြွာကို ကျန်လက်တဘက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးနေတယ်ထိုးသွင်းစိုက် ၀င်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်နက်မဲကြီးကို ဖြေးဖြေးခြင်း လှုပ်ရှားပေးလိုက်တယ်၊ ကျောပြင်တလျှောက်ကို နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ပွတ်ပေးရင်း၊ လျှာထိတ်လေးနဲ့ ကစားရင်း တန်းလန်းစိုက်နေတဲ့ တဏာမြှားမိုက်ကို ဦးခိုက်လျက် ရှေ့ဆက်တိုးစေလိုက်တယ်၊
နာပေမယ့် လူးခါမသွားပဲ မျက်စိ စုံမှိတ် အံကြိတ်ခံနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမ ကိုတော့ စိတ်ထဲ ၊ နှလုံးသားထဲက လိုက်လိုက်လှဲလှဲ ချီးကျူးမိတယ် သွင်းအထုတ် မှန်မှန်နဲ့ တစ်စတစ်စမြန်ဆန်လာတဲ့ တီးကွက်ကို ကိုယ်တိုင် တီးခက်ရင်း ရာဂဂယက်ထဲကို နစ်မြုတ်သွားခဲ့ပြီ၊နောက်စိ နားမှာ ခေါက်းစီးကွင်းနဲ့ စီးနှောင်ထားတဲ့ တွန်လိမ်ကောက်ကွေ့တဲ့ ဆံနွယ်ရိုင်းတွေ ကို စုကိုင်ပြီး လက်ဖဝါးမှာ တစ်ရစ် ရစ်ကာ ဆွဲကိုင်လိုက်တယ် ၊ အပြည့်အကြပ် ထိုးထည့်ခံ ထားရလို့ အတွန့်တွေမရှိတော့ တဲ့ စအိုဝကို အုန်ဆီ ထပ်လောင်း လိုက်ပြီး ဒုတ်မဲကြီး တစ်ချောင်းလုံးနီးနီး နောက်ကိုဆွဲထုတ် လိုက်တယ်၊ အထဲမှာ ဒစ်တစ်ခုစာကျန်မှ ဆံပင်တင်းတင်းဆွဲ ကိုင်လျက်နဲ့ မနှေးမမြန် အဆုံးထိ ပစ်သွင်းလိုက်တယ်၊ ” အီးးးးး ရှ် _ နာလိုက်တာ … အားဟ် အမလေး သေပါပြီတော့ ”
တစ်ချောင်းလုံးနီးနီးဆွဲထုတ်လိုက်တဆုံးနီးနီးပြန်သွင်းလိုက်နဲ့ကာမ ဂယက် စည်းချက်မှန်မှန် တီးခက်လို့နေတော့၏၊ပြီးပြည့်စုံသော နှစ်လိုဖွယ်အရသာပါပေတည်း၊ တွင်းနက်ထဲကိုဝင်ရောက်ရသောကာမ ခရီးမှာ ဒီ -ီး ဟာဖြင့် ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာပင်၊ကျင်ချောင်းထဲမှာ အရည်ကြည်များစိမ့်ထွက်လာပြီး ခြေလှမ်းတွေ လဲ ပိုသွက်လာတာ့၏ ၊ ထိုးသွင်းလို က်ချိန်မှာ အလိုက်သင့် ပွင့်အာပြီး ဆွဲနုတ်ချိန်မှာ စုတ်ယူဖမ်းစားပေးနိုင်သော ကြွက်သားနံရံတွေကြား ဒုတ်မဲကြီးကား ပြေးလွှားနေတော့သည်၊ အထိန်းအကွတ်မဲ့စွာ လှုပ်ခါတုံရမ်းနေသော ရင်စိုင်နှစ်မြွာကိုဆုပ်နယ်လိုက်မဲနက်ပြောင်ဝင်းပြီး ကော့ထောင်လျှက် စိန်ခေါ်နေသော တင်ပါးဆုံးကြီးတွေကို ခက်ကြမ်းကြမ်းရိုက်လိုက်နဲ့ အချစ်ပန်းတိုင်ဆီသို့ ခရီးပြင်းနှင်နေတော့တယ်၊
အောက်နှုတ်ခမ်းကို ခက်တင်းတင်း ကိုက်ကာ မျက်စိ စုံမှိတ် ကြိတ်ခံနေတဲ့ သူငယ်ချင်းမရဲ့ ခန္ဓာတခွင်မှာတော့ ချွေးတွေစီးကျလို့နေတယ်၊ပန်ကာလေအားကရော အခန်းပြင်တင်းက၀င်ရောက်လာတဲ့ မိုးသက်လေနုအေးကရော သူ့ကိုယ် ဗလာကို မအေးမြစေနိုင်ဘူး၊အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသွင်းပြီးချိန်မှာတော့ တုနှိုင်းမဲ့ခံစားမှုနဲ့အတူဆုံး ခန်းတိုင်ခဲ့တော့ တယ်၊” အား …. ဟ် _ ကောင်းလိုက်လေခြင်း အိုးးးး ဟ် “” အင့် _ ဟင့် … အ … အ ဟင့် ” ‘ နာတယ် ‘” အမလေး ဟွီးးး စအိုလေးကွဲ ပီလားမသိဘူး အား “လေးဘက်ထောက်ထားလို့ ပထဝီမြေပြင် ဆီအိကျနေတဲ့ ဗိုက် သားကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့အားပါး တရဖက်ကာ ဓားအိမ်ထဲဓားစိုက်ထားသလို အနောက်လှိုင်ခေါင်းထဲ တဆုံးထိုးသွင်းထည့် လိုက်တော့တယ်၊
တဆုံးဝင်ရောက်သွားတဲ့ အတံထိတ်ဝမှ ကျောရိုးတလျှောက်ကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ အဖြူရောင်ပြစ်ပြစ် လူဆီလူနှစ်တွေ ပြေးထွက်သွားကြ တော့တယ် ၊ အသားမရှိတဲ့ ခါးရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ မဲနက်ပြောင်လက်ပြီး ချွေးရွှဲနေတဲ့ဖင်တုံကြီးတို့ထိစပ်ပူးကပ်တဲ့ ထိုးသွင်းပစ်လိုက်တာ့ တယ်၊ ကောင်းတကာကောင်း လွန်းသော အနောက် တံခါးမှ ၀င်ရောက်ခြင်း အရသာ ပါတကား …. တင်းကြပ်စွာ ဆွဲငင်စုတ်ယူထားတဲ့ ဖင်ပေါက် ထဲကနေ လီး တန်ကြီးကို ဖြေးညင်းစွာ ထုတ် ယူလိုက်တော့ တယ် ။ ။ ပြီးပါပြီ ။ မူရင်းရေးသားသူ သိုင်းကျမ်းရှင်အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ် ခင်မျာ ။